Ragga da’dooda 45 jirka iyo wixii ka weyn ay u badan tahay inay dhallaan caruur qaba dhibaatooyin… – Hagaag.com
Ragga da’dooda 45 jirka iyo wixii ka weyn ay u badan tahay inay dhallaan caruur qaba dhibaatooyin…
Posted on 2 Nofeembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Daraasad cusub oo caafimaad oo Mareykanka lagu diyaariyey ayaa muujisay in ragga ku dhalla carruurta da’da 45 iyo wixii ka badan ay u badan tahay in caruurtooda ku dhashaan dhibaatooyin caafimaad.
Farac aabaha ee da’da weyn ayaa lagu arkay caruurtooda in ay yihiin kuwo miisaankooda yar yahay ama dhicisnimo ku dhashaan, iyo sidoo kale waxay u badan tahay in ay qaadaan cudurka qalalka, waxayna u baahan yihiin ilmahaasi in lagu hayo qeybta daryeelka deg degga ah.
Waxaa caan ahaa muddo dheer in haweenka dib u dhigga dhalida ay u badan yihiin in ay dhalaan caruur qaba dhibaatooyin caafimaad.
Daraasadan cusub oo lagu sameeyay Jaamacadda Stanford ayaa lagula socday 40 milyan oo dhalasho mudada u dhaxeysay 2007 ilaa 2016- waana daraasadii koowaad ee ugu horeysay muddo dheer oo baarta waalidiinta da’da weyn.
Waxa kale oo lagu ogaaday in ragga 45 jirka iyo wixii ka weyn ay u badantahay 14% in ay dhalaan ilmo dhicis ah oo miisaan yar marka uu dhasho, iyo waxay u badan tahay in dhallaanka 18% uu ku dhaco cudurka qalalka marka loo barbar dhigo caruurta waalidiintooda da’dooda u dhaxeyso 25 jir ilaa 34 jir.
Sidoo kale, ragga da’doodu ay tahay 50 sano iyo wixii ka weyn waxay u badantahay 28% in ay ilmuhu u baahan yahay in ay galaan qaybta daryeelka degdegga ah ee dhallaanka, iyo 10% oo u badan tahay in ay u baahdaan qalab lagu neefsado.
Baadhitaanka ayaa sidoo kale muujiyay, in hooyooyinka da’dooda 45 iyo wixii ka weyn ay u badantahay 28% in ay qaadaan sonkoroowga uurka marka loo barbar dhigo da’da haweenka ka yar 34 sano jirka.